browser များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များအကြား | Linux မှ
AurosZx | | applications များ, GNU / Linux များ, အခြား
ငါတို့အလယ်မှာရှိနေတယ် စစ်။ တစုံတယောက်သောသူသည်မဟုတ်၊ တစ်ခုတည်း ဘရောက်ဇာကိုစစ်ပွဲများ။ အဆိုပါ အများဆုံးအသုံးပြု browser (၄) ခု ယနေ့အဖြစ်ဖြစ်ကြသည် ခရုမ်း / ခရိုမီယမ် ( နှင့်တူသော), Firefox ကို (Iceweasel နှင့်…ဟုတ်ကဲ့၊ Cunaguaro တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။), တေးသံစုံကဇါတ်နှင့် Internet Explorer ကို (ဘရောက်ဇာလား) ။ ဘယ်မှာလဲအဆက်မပြတ်စစ်ဖြစ်နေတယ် လူတိုင်းကလူတိုင်းကိုကူးယူကြတယ် နှင့်ဘယ်သူမှအဖြစ်အရင်ကဲ့သို့အဖြစ်တီထွင်။ ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့စစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ (သို့) ဆောက်လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး ရေတံခွန် မဟုတ်ဘဲအဆုံးမဲ့ ငါပြောတယ် ကြိုးစားကြည့်ရအောင် အခြား browser များတစ်ခြားကွဲပြားတဲ့ကမ္ဘာရှိတယ်။
4 Midori, အစိမ်းရောင်ကြောင်အကြောင်းပြောနေတာ
5 Epiphany, အနည်းဆုံး
6 Rekonq, အ Konqueror အမွေကိုအောက်ပါ
7 Qt ရှိ Firefox ၏ဝမ်းကွဲ Qupzilla
Chrome ကို (ထို့ကြောင့် ခရိုမီယမ်) အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည် updates များ၏ရှင်ဘုရင်ငါတို့မှာရှိတယ် ဇာတ်ကား ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း လစဉ်လတိုင်းသို့မဟုတ် နှစ်ပတ်တိုင်း. အဲဒီမှာဘာတိုးတက်မှုများရှိသနည်း စိတ်ကူးမရှိပါဘူး၊ အရာအားလုံးဟာလျှို့ဝှက်ချက်ပါ၊ ပြီးတော့သင်အနည်းငယ်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကိုရှာဖို့သွားခဲ့ရတယ်။ မရရှိလျှင်, ဖော်ပြရန်အဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုအရေးကြီးသောတိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။
ထိုအခါမှယောက်ျားတွေ Mozilla က သူတို့ကအတူတက်လာ၏ ကြီးမြတ်တဲ့စိတ်ကူး အတူတက်ထားရန် Googleအတူတူပင်လုပ်နေတာ Firefox ကို။ အချိန်တိုင်း ဗားရှင်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရယူခြင်း, အလုံအလောက်အကောင်းဆုံးမရှိဘဲ။ မှ Firefox ကို 4အရာရုပ်ဆိုးတယ်။ က မလိုလားအပ်သောမှတ်ဉာဏ်စားသုံးမှု, ဗားရှင်း 15 အတွက် fixed ခဲ့တာ (ငါကောလဟာလတွေအများကြီးကပ်ခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကြိုးစားခဲ့သမျှက ၁၄ ဖြစ်တယ်၊ 😛) ။
အခုဆိုရင် browser (ဘရောက်ဆာ) တွေအများကြီးရှိတယ် တူညီ ဆိုတဲ့အချက်ကိုလိုပဲတစ် ဦး ချင်းစီကတခြား အများစု (အားလုံးမဟုတ်လျှင် ...) ရှိသည် extensions / plugins များအတွက်ထောက်ခံမှု သို့မဟုတ် speed Dial။ ဘယ်ဟာငါ့အတွက်မကောင်းဘူးလို့ထင်ရမလဲ၊ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကပိုပြီးထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေထွက်လာသင့်တယ် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ များပြားလှသော ထဲမှာ ဝဘ်စာမျက်နှာ rendering သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု.
ငါနောက်ဆုံးဝါကျကိုအလေးထားချင်, သယံဇာတသုံးစွဲမှု။ လူအများကအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဤအရာကိုဖယ်ရှားပစ်ကြသည် - «ဟေ့၊ ငါတို့ ၂၀XXXX ပြီးပြီ။ အင်အားကြီးတဲ့စက်တွေရှိတယ်«။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အသစ်တစ်ခုဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာပိုက်ဆံအားလုံးရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုကောင်းတယ်ထင်တယ် ပိုကောင်းအောင်၀ ယ်ရန်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ထွက်မသွားဘဲ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဟာ့ဒ်ဝဲ.
ဟုတ်ကဲ့၊ Chrome / Firefox / Opera။ ငါတို့ဘယ်နှစ်ယောက်သုံးပြီးကြိုးစားခဲ့ကြပြီ နေ့စဉျ ဘယ်လို browser များ Epiphany, မီဒိုရီ, Rekonq o Qupzilla? ဟုတ်ကဲ့၊
ဒီ browser (ဘရောက်ဆာ) တွေကသိပ်မများဘူးလို့ဆိုကြပါစို့။အဆင့်မြင့်"ကြွင်းသောအရာကဲ့သို့။ မရရှိလျှင် ငါတို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်အမှားများကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်၊ သူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့မမျှော်လင့်နိုင်ပါ တိုးတက်လာသည် သူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်အစာရှောင်ခြင်း လူများ၏အရေအတွက်သောရိုးရှင်းတဲ့အချက် သူတို့ကိုသုံးပါသင်၏တီထွင်သူများကိုအားပေးရန် ပိုကြိုးစားပါ.
ဒါဟာပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မီဒိုရီ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ခါလောက်၊ ဒါပေမယ့်မင်းမှတ်ဉာဏ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်တာကောင်းတယ်။ မီဒိုရီ browser တစ်ခုဖြစ်သည်အလင်း"(la ဝီကီပီးဒီးယား ဗားရှင်း 0.4.0 အရဒီရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မသေချာဘူး။နှင့်အတူ GTK interface ကို။ အသုံးပြုပါ နေပြည်တော် (GTK windows တွင် Webkit လာသည်) ဆပ်ဖို့ ကွန်ရက်စာမျက်နှာများ။ သတိရပါ ခရုမ်း / ခရိုမီယမ် usa ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒါ့အပြင်သူတို့တစ်တွေတင်မြန်နှုန်းရှိသည် တူသော.
သင့်နာမည်နှင့်စပ်လျဉ်း။ မီဒိုရီ ဆိုလိုသည်မှာစိမ်းလန်းသော»ဂျပန်ဘာသာနှင့်၎င်းအမှတ်တံဆိပ်သည်ကြောင်၏ paw ဖြစ်ပြီးအောက်ခြေတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည် အရှိန်။ ထိုအဟုတ်, ဒါကြောင့်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့က၎င်းကိုပုံမှန် browser အဖြစ်သိကောင်းသိပေမည် ချစ်သူအဖြစ်တစ် ဦး အကြံပြု applications များ Xfce အဖွဲ့က (၎င်း၏ developer လာရာမှ) ။ ဒါဟာအစ«တွင်ပါဝင်သည်အလင်း"(LXDE သို့မဟုတ် Xfce နှင့်အတူကဲ့သို့အချို့သော distros ကနေ အရက်, Slitaz သို့မဟုတ် Sabayon.
မီဒိုရီ ရိုးရှင်းတယ်၊ ဘာရှိတယ်၊ အခြေခံ ဘရောင်ဇာတစ်ခုမှာတွေ့လိမ့်မယ်။ Tabs, အမှတ်အသားများ, က speed Dial နှင့်အချို့ extension များ. မီဒိုရီ နှင့်အတူသဟဇာတဖြစ်ပါတယ် UserScripts များ y အသုံးပြုသူပုံစံများ (ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမရှိခြင်းအတွက်ဘာမျှမဆိုးပါ) ။ ထဲမှာ extension များပါဝင်သည် ထူးဆန်းတယ် ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းတစ် ဦး cookie ကိုအယ်ဒီတာတစ် ဦး RSS feed စာဖတ်သူအခြားသူများများထဲတွင်။
စဉ် မီဒိုရီ ထဲမှာပါဝင်သည် repositories အများဆုံးဖြန့်ဝေ၏, ကများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ် ဗားရှင်း 0.4.3 သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း။ သင်နောက်ဆုံးဗားရှင်းရချင်တယ်ဆိုရင် မီဒိုရီ (0.4.6), သင် download လုပ်နိုင်ပါတယ် .tar.gz ဒီမှာ:
သင်တစ် ဦး လိုလျှင် .deb အထုပ် ကြောင်းများအတွက်အများကြီးအလုပ်လုပ်တယ် debian လျှင်အဖြစ် Ubuntu ကို (နှင့်နှစ် ဦး စလုံးမှဆင်းသက်လာ), သင်ဒီမှာကဒီမှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်:
Midori .deb (၃၂-bit)
အဲဒါဟာအနည်းဆုံးအသုံးပြုတဲ့နောက်တစ်ခုလို့ပြောနိုင်တယ်။ Epiphany (ယခု "ဝဘ်" ကိုခေါ် ...) သည် desktop ၏ပိုင် browser ဖြစ်သည် Gnomeနှင့်အသုံးပြုသည် ဝက်ဘ်ဆိုက် ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုပြန်ဆိုရန်။ ဒါဟာ၎င်း၏အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အလှည့်တစ် ဦး ရှိပါတယ် လျောက်ပတ်သောစားသုံးမှု.
၎င်းသည်ဘရောက်ဇာမှဆင်းသက်လာသော«Galleon«သို့သော်ယခုနှင့်လိုက်နာရန်Gnome လူ့ interface ကိုစံချိန်စံညွှန်း"။
ထက်နည်းပါးလာ features တွေရှိပါတယ် မီဒိုရီ, ဒါပေမယ့်အဲဒါကဒီထက်နည်းအသုံးဝင်စေပါဘူး။ သီးခြား, သူတို့ရဲ့ extension များအရာတို့တွင်အကြား ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်း, ကစားသမား HTML5 ဗီဒီယို Youtube အတွက် (အကယ်၍ စာမျက်နှာကသင့်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးလျှင် ...), ဟားဟား (UserScripts အသုံးပြုရန်), အကြား။
များစွာသော distros များမပါရှိသော်လည်း, ငါတို့ရှိသည် Epiphany အသုံးအများဆုံး distros ၏ repositories ကို၌တည်၏။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန် debian ငါတို့လုပ်သည်
Rekonq, အ Konqueror အမွေကိုအောက်ပါ
အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က၎င်းသည်ဗားရှင်း ၁.၀ သို့ရောက်ရှိပြီးကတည်းကအများစုသည်ဤဘရောင်ဇာအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးဖြစ်ရမည်။ အရင်ကလိုပဲ rendering engine ကိုသုံးပါ ဝက်ဘ်ဆိုက် (ပိုပြီးတိကျစွာပြောရရင် ကွမ်းခြံကုန်း), ထိုသို့သူကဆိုပါတယ်နိုင်ပါသည် ဆက်ခံသည် browser Konqueror။ သင့်အတွက်လက်ခံနိုင်သောစားသုံးမှုရှိသည် ရွေးချယ်စရာများစွာ, desktop applications များသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သော KDE.
အမျိုးမျိုးသောဖြန့်ဝေတူ Chakra y Kubuntu သူတို့ကသူတို့က default browser အဖြစ်ကမွေးစားပါပြီ။
၎င်းတွင် extension များအတွက်အထောက်အပံ့မပါရှိသော်လည်း၎င်းတွင်ရှိသည် Flash နှင့် HTML5 ကိုထောက်ပံ့သည်။ ငါ့ကိုအံ့အားသင့်စေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ယနေ့အထိအဲဒါပေါ်မူတည်တယ် Konqueror သင့်ရဲ့ပြောင်းလဲပစ်ရန် အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ် (ကျွန်တော်သိသလောက်…).
ကျနော်တို့ဖြန့်ဖြူးအားလုံးနီးပါးအတွက် install လုပ်နိုင်ပါတယ် debian ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်သည် -
Qt ရှိ Firefox ၏ဝမ်းကွဲ Qupzilla
Qupzilla အပေါ်အခြေခံပြီးလုပ် browser တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Firefox ကိုတစ် ဦး ရှိခြင်းအပြင်အနည်းငယ်အသွင်အပြင် tweaks နှင့်အတူ Qt သုံးမယ့်အစား XUL (ပိုကောင်းတဲ့ GTK သို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်) ။ ကြည့်ရတာပေါ့ Firefox ကို၎င်း၏ rendering အင်ဂျင်သည် ဝက်ဘ်ဆိုက်။
ဒါဟာနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ် extension များ / plugins များ de Firefox ကို, သင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ် အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ် preferences menu မှစကားဝှက်များကိုသိမ်းပါ ကွမ်းခြံကုန်း, ဘက်ပေါင်းစုံကြော်ငြာ blockerတစ် ဦး ကြိုးစားကျိန်းသေကျိုးနပ်။
ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည် အထုပ်ကို download လုပ်ပါ ငါတို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းပါ (Chakra ကဲ့သို့၎င်းကို၎င်း၏ repository တွင်ဖြန့်ဝေခြင်းမရှိပါက).
En Debian / Ubuntu နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျဤကဲ့သို့သော installed လိမ့်မည် (ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဖွင့်နိုင်ပါတယ် GDebi):
ဘယ် browser တွေကကြိုက်လဲဆိုတာသူတို့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် Rekonq y မီဒိုရီ သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းတိုးနှင့်ဗားရှင်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ၎င်းတို့တွင်ဗားရှင်းများစွာရှိသောအခြားဘရောင်ဇာများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်။
ဒါကသေးငယ်တဲ့ Browser ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါ မီဒိုရီ y ခရိုမီယမ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက်။ ပြီးတော့သင်, ဒီဘရောင်ဇာတစ်ခုခုကိုသင်အသုံးပြုပါသလား။ အဘယ် browser များသူတို့အသုံးပြုကြသနည်း။ လူတိုင်း၏ထင်မြင်ယူဆချက်သည်ဤနေရာတွင်မှန်ကန်ကြောင်းသတိရပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » browser များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များအကြား
ငါမကြာခဏ browser များပြောင်းလဲပစ်သည်, ငါသူတို့အားလုံးကိုကြိုးစားကြည့်ခြင်းနှင့်သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်အစဉ်မပြတ်ငါ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ပြန် Firefox ကိုပြန်လာမယ့်အဆုံးသတ်။ ငါစာရင်းထဲမှာသင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုရော၊ ငါသူတို့အားလုံးကိုလည်းအညီအမျှသဘောကျနှစ်သက်တဲ့လူနည်းစုတွေသုံးပြီးသုံးခဲ့တယ်။ Midori မှစကားဝှက်မန်နေဂျာ၊ Rekonq မှပိုမိုတည်ငြိမ်မှုနှင့် (လူနည်းစုတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာနိုင်သည့်) Qupzilla မှကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော bookmark စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလက်လွတ်သည် (ကျွန်ုပ် folder ထဲမှဖိုလ်ဒါများစွဲလမ်းသည်) ။
ငါမှာ Midori ရော Qupzilla နှစ်ခုလုံးရှိတယ်၊ ငါသူတို့ကိုမုန်းတယ်။ ငါ Qupzilla ကိုသုံးပြီးခလုတ်ပိတ်ချင်ရင်မကြာခဏဖြစ်တတ်သည်။ ဒါပေမယ့် Midori ပိုဆိုးတာကသူဟာ Qupzilla ထက်ရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တယ်
Midori မှာကျွန်တော်အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ငါကြိုတင်ပြုစုထားတဲ့အထုပ်ထဲကမဟုတ်ဘဲအရင်းအမြစ်တွေဆီကနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို install မလုပ်မချင်းလုပ်ခဲ့တယ်။
ငါ git ဗားရှင်းကိုသုံးသော qupzilla၊ ၎င်းသည်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရှားပါးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုလွှတ်တင်ပြီးမကြာမီထို tab သည် tab ထဲတွင်ပေါ်လာပြီး၎င်းကို စတင်၍ ပြုပြင်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုထို bug နှင့်အတူကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ဒါကအရင်ဗားရှင်းတွေထက်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး၊ (0.4.6 ကိုသုံးပြီး) ကျွန်တော့်အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာမပိတ်ထားခဲ့ပါ။ ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ https ပြevenနာတွေကိုတောင်သူတို့ကဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တွင် ၀.၄.၆ (Sabayon ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသော) ကျွန်ုပ်သည် adblocker ကိုပြုပြင်လိုသောအခါပိတ်သည်
Qupzilla နှင့်အတူကျွန်ုပ်တွင် ၁.၃.၁ (၄ င်းတို့မှာဗားရှင်းမတိုင်မီ ၁.၁.၈ ရှိခဲ့သည့် Sabayon bugzilla တွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်)
SRWare သံရုံအလေ့အထထဲက။ Midori ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အဲဒါဟာရိုးရှင်းပါတယ်၊ ငါအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ haha ​​နဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေစာတွေပို့ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်
ငါကိုယ်တိုင် Rekonq နှင့် Opera ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်နှစ်မျိုးလုံးတွင်အချို့သောစာမျက်နှာများ (အထူးသဖြင့်ဂူဂဲလ်) နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်သောပြproblemsနာများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်ခရိုမီယမ်ကိုအားကိုးသည်။
ဆောင်းပါးကောင်း Qupzilla ကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကြည့်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။ Opera နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုသိချင်တယ်။ အရင်ကသုံးဖူးတယ်၊ အခုဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာငါမသိဘူး။
ငါ SRware Iron or Chromium, midori, firefox, epiphany နဲ့မကြာခဏဆိုသလို၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Iron and Midori ကိုပိုနှစ်သက်တယ်။
Konqueror ကိုသုံးသောအချိန်များများရှိသော်လည်း Opera ပိုများလာသည်။
ကောင်းပြီကျွန်တော် Firefox နဲ့ Rekonq ကိုသုံးပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောအထူးသဖြင့်တည်ငြိမ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အများကြီးတိုးတက်ခဲ့သည်။
ငါကဲ့သို့ပင်အဓိက Firefo-kde-opensuse (အစုအဝေးထဲ၌ရှိနှင့်ပြီး) နှင့်ဒုတိယ rekonq, qupzilla အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၎င်းသည် multi-platform ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ chome, firefox နှင့် IE သည်လူသိအများဆုံးဖြစ်ပြီး Opera သည် Epiphany (web), Midori, etc နှင့်အတူအခြားသောစာရင်းတွင်ပါလိမ့်မည်။ သာမန်လူများသည် Opera တည်ရှိကြောင်းနှင့် chome, firefox နှင့် IE ရှိလျှင်ပင်မသိကြပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဒီမှာကြာမြင့်စွာမနေခဲ့ပါ။ ဆောင်းပါးကောင်းတယ်၊ ငါဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သောကြိုးစားနေသည့် Qupzilla မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်အားလုံးသိမ်းပိုက်လိုက်သည်ထင်တယ်။
အသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်အော်ပရာကိုအသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံး ၄ ခုအနက်မှ mmm၊ Firefox, chrome / chromium ကိုအသုံးပြုနေသော်လည်းအော်ပရာကိုမူ ပို၍ နှစ်သက်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော post
အဓိက browser သည် firefox နှင့်ဒုတိယ qupzilla ဖြစ်သည်။
ငါ linux tube ဖြင့်စတင်သောအခါအခြား firefox များ (chromium / srware, iron, opera, qupzilla, rekonq) ကိုစမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် firefox ၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သောကြောင့် (ဤမူကွဲအသစ်များနှင့်တိုးတက်ခဲ့သည်) စမ်းသပ်မှုများမှာ
* chromium / srware iron: အလွန်လျှင်မြန်ပြီး kde နှင့်ကောင်းမွန်စွာပေါင်းစည်းနိုင်သော်လည်းခရိုစတိုင်လ် browser များနှင့်ကျွန်ုပ်တွင်အသားအရေပြproblemsနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ် interface ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
အော်ပရာ - ငါကြိုက်တယ်၊ တကယ့်ကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးပြုပြင်လို့ရပါတယ်။ အော်ပရာ 12 ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ အဓိကဘရောင်ဇာဖြစ်လာတော့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဗားရှင်း ၁၂ ကိုမွမ်းမံတဲ့အခါ၊ Firefox (မလုံလောက်သေးဘူး) ဒါကြောင့်ငါကိုသုံးပြီးအရှုံးပေးလိုက်တယ်။
* rekonq: kde နှင့်အလွန်ကောင်းသောပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သော်လည်းအလွန်တည်ငြိမ်မှုမရှိသောကြောင့် Bookmarks ခလုတ်ကိုထပ်ထည့်။ မရပါ။
* qupzilla: firefox နှင့် chrome ကြားရှိကလေးသူငယ် - မြန်ဆန်လွယ်ကူသည် qt နှင့် webkit မှအထူးသဖြင့်တည်ငြိမ်ပြီး၊ ကူးယူခြင်းမခံရပဲ firefox interface ၏ element များကိုယူဆောင်သည်။ ထို့အပြင် update အသစ်တစ်ခုနှင့်အတူ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုများကိုရရှိပြီး၊ တည်ငြိမ်မှု။
* firefox: ငါကအမြဲတမ်းကြိုက်တယ်၊ မနက်ဖြန် (သို့) တစ်နှစ်အကြာမှာအဲဒါကို scratch ကနေ install လုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါ၊ ငါရှိသည် "about: config" options ကိုနှလုံးသားဖြင့်အမှတ်ရနေတဲ့အတိုင်းအတာအထိကိုင်တွယ်လေ့ရှိတယ် ငါလိုချင်တဲ့အတိုင်းထားခဲ့ဖို့ထိဖို့။ ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ interface ကအရမ်းကိုသိပ်ပြီးမကူဘူး။ kde နဲ့ပေါင်းစပ်မှုမကောင်းဘူး (plugins တွေရှိတယ်၊ ဒီဟာ openuse ဗားရှင်းပဲ) ။ သူကအပြည့်စုံဆုံး add-ons / plugins တွေရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းကတော့နှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ တူညီသော plugins များသည် chrome / chromium ကိုဆောင်ကြဉ်းပြီး Firefox မှယူဆောင်လာသည့်အရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည် (အရာများမှအရာဝတ္ထုများကိုပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်အတူ) အားလုံး၏ navigation bar အားအသုံးချပြီး plugin များကိုတပ်ဆင်ခြင်းမပြုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Firefox ပေါ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။
Google ကို Mozilla နှင့်ငွေချေးရန်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ငြီးငွေ့လာပြီး FF ကိုဆက်လက်အစဉ်အမြဲဆက်လက်အသုံးပြုနေခြင်းရှိမရှိသေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။ xD
Firefox ကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်။ ငါ "versioning" ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူတိုးတက်မှုများသည်အလွန်ထင်ရှားပြီးယုံကြည်သူတစ် ဦး ပါ။ ဆောင်းပါးကောင်း
၎င်းသည် 'common' interface ရှိသည့် browser များဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းငယ်မျှသောစိတ်ထားရှိသည့်ဘရောက်ဇာများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် Vim သို့မဟုတ် Emacs ဖြတ်လမ်းများ၏အားသာချက်ကိုရယူရန်ကြိုးစားသည်သို့မဟုတ်ငါဘာသိသည်သို့မဟုတ်အစွန်းရောက်အလင်းကိုဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။
Luakit ဥပမာ; ၎င်းသည် Webkit အင်ဂျင်ရှိ Window Manager Awesome နည်းတူ Lua programming language ကို အခြေခံ၍ configuration အစီအစဉ်ကို အသုံးပြု၍ Vim ကိုချဉ်းကပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဤသည်မှာဤပရိုဂရမ်အမျိုးအစားများသည်အလွန်ရှားပါးသည်။
ဒါပေမယ့်ဟေး, ကောင်းသောမှတ်စု; သို့သော် Qupzilla သည် Gecko မဟုတ်ဘဲ Webkit ကိုအခြေခံသည်။ ဒါကြောင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံရသည်ပေမယ့်; တူညီတဲ့အရာရှိတ ဦး ကစာမျက်နှာဒါကပြောပါတယ်။
Firefox ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးခဲ့သည်။ ပထမနှစ်တွင်ကွန်ပြူတာ (၁၉၉၉) မှ လွဲ၍ ၎င်းသည်၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုသတိပြုမိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပင်မ browser ဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်။ tab ၃၆ ခုအထိဖွင့်လိုက်တာနဲ့သွားတဲ့လမ်းအတွက်လည်း chrome ကကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကိုသေစေပြီး tabs များအကြားပြောင်းတဲ့အခါမှာငါ့ midori ကအရမ်းရှုပ်ထွေးပါတယ်။
ငါ Qupzilla ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်
ဤ browser (၄) ခုကိုအများအားဖြင့်အသုံးပြုရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာ၎င်းတို့သည်လက်တွေ့ကျကျတစ်ခုတည်းသောတစ်ခုတည်းသာရှိသောသင်က web content ၏ 100% ကိုပြwithoutနာမရှိဘဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်၊ သင်ဖွင့်သည့်အချိန်တွင် tab ၄၀ ဖြင့်သင်အနားယူသောအခါသင်သိသော site ပေါ်တွင်အစာရှောင်ပါ။
သင် Safari အကြောင်းမေ့လိုက်တယ်။
အဒေါနိဇ် (@ NinjaUrbano1) ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ Midori ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ browser တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Iceweasel, Chromium နဲ့အတူကျွန်တော်အများဆုံးသုံးတဲ့ထဲကတစ်ခုပါ။
Adoniz (@ NinjaUrbano1) ကိုတုံ့ပြန်ပါ။
ထပ်တူပြုခြင်း bookmarks, passwords နှင့်အခြားအရာများကို "cloud" မလုပ်နိုင်သရွေ့ကျွန်တော် Firefox ကိုဆက်သုံးမည်။
ဒီနေ့အထိဒီ function ဟာလုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။
Opera သည်နှစ်များတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသလောက် Firefox မထည့်သွင်းခင်ကတည်းကစဉ်းစားပါ။
ထိုအရာသည်မှန်ပါသည်၊ Firefox သည်အမြဲတမ်းအရာများရှိသည်။
သို့သော်သူသည်များသောအားဖြင့် "အထူးသီးသန့်" ရရှိသူဖြစ်သည်။
Chrome နဲ့ FF တို့လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်၊ သူတို့က Apple ဆီကကောင်းကောင်းသင်ယူခဲ့တယ်။ Marketing !! xD
အော်ပရာနှင့်အတူ Opera Link ၏အမည်နှင့်အတူ option ကိုအတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်
QupZilla သည် Webkit core နှင့် Qt Framework ကိုအခြေခံသည့်ခေတ်မီသော web browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ WebKit သည်အဓိကပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်အစာရှောင်ခြင်းနှင့် Qt ရရှိနိုင်မှုကိုအာမခံသည်။
Opera သည် Netscape မြေပုံဖြစ်ကတည်းကသေံကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အမြန်ခေါ်ဆိုမှု၊ သိမ်းဆည်းခြင်းများ၊ tabs များစွာ၊ pop-ups များကိုပိတ်ခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်းပိုမိုလွယ်ကူစေရန် animations များကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အခြား browser တစ်ခုအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ torrent client၊ mail client၊ download manager, zoom, turbo, အချက်အလက်များသန့်ရှင်းရေး၊ အမူအယာများ၊ gadget များ၊ စည်းလုံးမှု၊ စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးမှု၊ tabs များ၊ အော်ပရာလင့်ခ်၊ အော်ပရာမိုဘိုင်းအော်ပရေတာများစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။ ။
စကားဝှက်များ၊ မှတ်စုများကိုတပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်အတူ Opera Link သည် Panels နှင့်သင်ဖော်ပြသောလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးမှတစ်ချက်နှိပ်ခြင်း၊ စာမျက်နှာတစ်ခု၏အကျယ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း [ကျွန်ုပ်သည်ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုမကြာခဏအသုံးပြုသည်]၊ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။ သီးခြား ၀ င်းဒိုးတစ်ခု၊ တိုးချဲ့မှုများကိုကျွန်ုပ်ဖွင့်ရသည်။ သို့သော်သူကိုယ်တိုင် Firefox တွင်ပင်အသုံးမပြုပါ။
အလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး။ ကျွန်ုပ်အိမ်တွင် Firefox, Midori နှင့် Chrome ကိုသုံးပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌ Midori ရုတ်တရက်ပိတ်သောပြ,နာ ရှိ၍၊ ကွန်ပျူတာသည်အလွန်နှေးကွေးသည်။ Firefox ဟာကျွန်တော့်အတွက်တကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ LXDE ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ယူလာပေးသော CPU monitor နှင့်လည်း Chrome သည်ထိပ်ကိုမည်သို့သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်သည်။ ငါအိမ်ပြန်ချင်တယ် Rekonq, အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး။
ဆောင်းပါးကောင်း ကာကွယ်ရေးအတွက်ရရှိနိုင်တဲ့ browser (ဘရောက်ဆာ) အားလုံးနီးပါးကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ Firefox ကိုအမြဲတမ်းပြန်ပါတယ်။
ကောင်းတယ် !! ကြည့်ရှုပါ၊ ကျွန်ုပ် Epiphany နှင့် Midori ကိုတစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြိုးစားပြီးအသုံးပြုခဲ့ပြီးပါပြီ။ သင်လိုချင်သောအရာသည်အရင်းအမြစ်နိမ့်ကျသောမြန်နှုန်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါက haha ​​ကို Chrome စတိုးဆိုင်လောကသို့မ ၀ င်လိုပါကအလွန်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိပါမည်။ ငါ၏အရသာအဘို့အရာအနည်းငယ်ကို tools တွေကိုရှိပါတယ်။
အကယ်၍ မရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ netbook တွင် Firefox ကို Xubuntu ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ desktop ပေါ်တွင် Chmbium ရှိသည်။ ၎င်းသည် tmb သည်အလွန်မြန်သော်လည်းအရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုသုံးစွဲသည်။
ပြီးတော့အရိုးစွဲနေသော: Windows သည်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အလုပ်လုပ်သည်
စာကောင်း ငါအော်ပရာနဲ့ခရိုမီယမ်ကိုသုံးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပြmanyနာအများကြီးမပေးနိုင်ဘူး (firefox ကငါ့ရဲ့ CPU ကိုအလွန်အကျွံတင်တယ်၊ Midori ပိတ်ပြီးငါ qt ကိုမကြိုက်ဘူး)
ငါဝန်ခံရမယ်ငါ FEDORA 17 ကို install နှင့်ဤကဲ့သို့သောဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေနေအကြောင်းစပ်စုခဲ့သည်ကတည်းကငါအသစ်သောအရာလေ့လာသင်ယူနေပါတယ်။
ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီဘရောင်ဇာများတည်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ် Internet Explorer ကိုသိလျှင် Mozilla Firefox ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနှင့်ကျွန်တော် Firefox ကိုနှစ်သက်သည်။ Opera နှင့် Google's
အထူးသဖြင့် MIDORI ရှိသူတွေကိုငါကြိုက်ရင်ကြိုးစားမယ်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်အရသာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် vivecersa ။
၎င်းတို့သည်မည်မျှစိတ်ချရသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ အချို့က internet explorer သည်ဗိုင်းရပ်စ်များ၏တိုက်ခိုက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းသို့မဟုတ်ဤဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကို run နိုင်သည်ဟုအချို့ကပြောကြသည်မှာအချို့က firefox ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ပိုကောင်းသည်ဟုပြောကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဗားရှင်းသာဖြစ်ပြီးအပြောင်းအလဲများစွာမရှိဘဲဖြစ်နေသည်။
ကောင်းပြီ၊ ကွန်ပျူတာအကြောင်းသိပ်မသိဘူး၊ သူတို့ပြောတာတွေကိုပဲငါမျှဝေလိုက်တယ်။
ဤသဘောမျိုးဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် browser ကိုမည်မျှအသုံးပြုသည်ဆိုသည့်အချက်ထက် ပို၍ လာနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်အချို့သောဘရောက်ဇာများမှာရှိသည့်အချို့သောအပိုအသေးစိတ်များဖြစ်သောဥပမာ Chrome tab မှ sandbox နှင့်အချို့ browser များရှိသည့် ASLR နှင့် Windows DEP ကဲ့သို့သောဇာတိ OS အရာများနှင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုထည့်သွင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါယုံကြည်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကငါ browser (ဘရောက်ဆာ) များသည်ထိုအရာများနှင့်ပေါင်းစပ်သင့်သည်၊ IE9 နှင့် Chrome သည်အကောင်းဆုံး / တစ်ခုတည်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တခါဖတ်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မှားယွင်းသောအရာများမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သိသည့်အတိုင်း“ စိတ် ၀ င်စားသည့်အခါမည်သည့်အတားအဆီးမျှမရှိပါ” နှင့်မသင်္ကာဖွယ်အသုံးပြုသူများသည်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားကြပါသည်။
IE ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် IE ကိုသုံးပြီးအရာရာတိုင်းကို install လုပ်လိမ့်မယ်။
အချို့ကမူ Firefox သည်ပုံမှန်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ပိုကောင်းသည်ဟုပြောကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဗားရှင်းသာဖြစ်ပြီးအပြောင်းအလဲများစွာမရှိဘဲဖြစ်နေသည်။
သူတို့ကပြောသည်မှာ Firefox သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အပြောင်းအလဲ၏အကြောင်းပြချက်သည်အပြောင်းအလဲအတွက်မျှသာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အမြဲတမ်းပြောဆိုပြီးအသစ်ပြောင်းခြင်းသည်မကြာသေးမီကဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ၊ ၎င်းသည်ယနေ့အတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်ကောင်းမွန်သောအရာများဆောင်ခဲ့သော်လည်း (အနည်းဆုံး၎င်း browser သည်အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကများစွာနောက်ကျသွားသည်) ၎င်းသည်ပြproblemsနာများနှင့်မတည်ငြိမ်မှုများကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်အချို့သောထုံးနှင့်အခြားသဲများမှာမူအံ့ဖွယ်အမှုမဟုတ်ပါ အရာအားလုံးကိုရွှေဖြစ်သွားတယ်
ကောင်းပြီ၊ ငါ Chromium နှင့် Firefox ဆီသို့ ဦး တည်သည်။ )!
ကောင်းပြီ၊ ငါအားလုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့ပြီးပြီ (Opera Konqueror Firefox Qupzilla Chrome Gnome web Chromium နှင့် Rekonq) ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများသည် Gnome web Firefox Opera နှင့် Chrome ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနည်းဆုံးနှင့်စွမ်းအားကိုရှာဖွေသည်၊ Midori ကသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသော်လည်း Midori တွင်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်ရိုးသားမှုသည်ခက်ခဲသည်။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးဘရောက်ဇာများထဲတွင်၎င်းကိုမစာရင်းသွင်းပါ
ဟုတ်တယ်၊ ခရိုမီယမ် Bookmarks များကို Midori import သို့တင်သွင်းရတာစိတ်ရှုပ်ထွေးပါတယ်
ဒါ့အပြင်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မူလ OS ကိုမထည့်ခင်ငါးကြိမ်လောက်စဉ်းစားမိပါတယ်၊
၎င်းသည်ဆွေးနွေးနေသောအကြောင်းအရာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါ net ထဲမှာမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမျှဝေချင်တယ်။ တကယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်မမှန်လားသင်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလိုချင်တယ်။ Linux နဲ့ mac အောက်မှာ OS ကိုကူးစက်နိုင်တဲ့ Trojan အသစ်တစ်ခုကိုရည်ညွှန်းတယ်။
Midori ကိုပိတ်လိုက်သည်ဟုပြောသူများအတွက်မူ ၄.၆.၆ တွင်ယခင်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပျက်မှုနီးပါးမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသတိရပါ။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်စာမျက်နှာမှပိတ်ထားခြင်းမရှိပါ
JP (@edconocerte) ဟုသူကပြောသည်
ခရိုမီယမ်။ ကျွန်ုပ်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ကိုချိတ်ဆက်ပြီး Bookmarks၊ သမိုင်း၊
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သိသည်မှာ Firefox Sync (နှင့်အခြားသူများ) သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် Google Apps ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်။
JP သို့ပြန်သွားသည်။ (@edconocerte)
Internet Explorer တွင်ယနေ့ဤသတင်းကိုကြည့်ပါ
မည်သူမဆို kde အတွက်အလင်းနှင့်တည်ငြိမ်သော browser ကိုအကြံပြုပေးနိုင်ပါသလား။
Desktop ကိုကျွန်ုပ်အထူးအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ 1,7GB သည် firefox 15 ရှိလေးလံသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ င်ရောက်ရန်မလုံလောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်လုပ်သမျှကိုလုပ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ထို RAM ဖြင့် KDE ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ firefox သည်အပေါ့ဆုံးဖြစ်ပြီးနောက်တွင်အော်ပရာလိုက်သည်
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ရင်ငါ့ရဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ရွေးချယ်စရာကတော့ Gnome web ပါ
W မှာ Safari နှင့် Chrome ကိုအသုံးပြုပြီးနောက် Midori, Rekonq နှင့်အလုပ်လုပ်ရာတွင်စိတ်ပျက်အားငယ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ကျွန်ုပ်၏ LM13-KDE-64 တွင် RAM 6GB ပါသောမှတ်ဉာဏ်သည်ပြtheနာမဟုတ်သော်လည်း၊ ငါသူတို့ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်အားချိတ်ဆွဲထားသည့်အမှားများကိုသတင်းပို့ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားနေသည်။ သို့သော် Chromium, Firefox နှင့် Opera တို့နှင့်အလုပ်လုပ်ရခြင်းကမည်သည့် OS တွင်မဆို၎င်းတို့ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်စေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Linux ကိုရွေးချယ်ပါကသင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤပရိုဂရမ်များကိုတီထွင်သူများအားအချို့သောအလုပ်များဖြင့်သူတို့အားနေ့စဉ်တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသည်။
ငါအထက်ပါဖြည့်စွက်; qupzilla_1.3.1_amd64 ဗားရှင်းကို .deb တွင်ကူးယူပြီးထည့်သွင်းခဲ့သည်။ စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်သာဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နည်းလမ်းရှာ။ မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် QupZilla-1.3.5 ဗားရှင်းကိုတိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် စပိန်ဘာသာမဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ဦး စားပေးမှုများတွင် - အထွေထွေရွေးချယ်စရာ ၂ ခုသာရှိသည်။ စပိန်၊ ဗင်နီဇွဲလား (es_VE) နှင့်စပိန်၊ စပိန် (es_ES) ။ ပြန်လည်စတင်ပါ။ ငါအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသူများအတွက်မိုက်မဲပုံရသည်ပေမယ့်ငါနဲ့တူ Linux ကိုအသစ်စက်စက်နှင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့, ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ဖို့မကကြီးမားတဲ့အကူအညီဖြစ်စေခြင်းငှါဤပို့စ်တင်ရန်
ခေါင်းစဉ်သို့ပြန်သွားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဘရောက်ဇာကိုအလွန်သဘောကျ။ အလွန်ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ Bookmarks, Password များနှင့်စတိုင်များကိုပြproblemsနာမရှိဘဲတင်သွင်းခဲ့ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုမည်။
ငါအမြဲတမ်းဘရောင်ဇာကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်။ Bookmarks များတင်သွင်းခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တစ် ဦး ချင်းစီကိုပေးသောအသုံးပြုမှုအတွက်များစွာအရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမရှိပါ။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ် Chrome၊ Firefox နှင့် Opera ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးနောက် Midori ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုပါသည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးမရှိပါ။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကတစ်နေ့မှာတစ်ယောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။
ငါထူးဆန်းတာကငါ Lubuntu ကိုသုံးနေတယ်။ အဲဒါဟာငါ့ကို MacOS, hahahahaha ကိုသုံးတာငါ့ကိုပစ်လိုက်တာပဲ။
ပို့စ်တင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Browser တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Chrome ကိုဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ Bookmarks, Extensions and Synchronization ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကသူတို့ကိုဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ ရွှင်လန်း!
ငါ Trisquel Mini တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်လတ်တလောထွက်ပေါ်လာသောနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုစစ်ဆေးနေသည်။ (ငါတို့ရှိနေသောကြောင့် Trisquel သည်အလွန်ကြီးမားသောဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်သည် !, ၁၀၀% အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်၊ Kernel ၏အမြစ်မှ desktop ပေါ်ရှိအဆုံးအထိ) ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ထားသောစက်အားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ ကိုတောက်ပစေခဲ့သည်မှာအနည်းဆုံးအဆင်မပြေမှုမရှိဘဲချက်ချင်းပင်အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ သူက Midori က၎င်းသည်မည်မျှကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မတည်ငြိမ်သေးသော်လည်းအရာအားလုံးကိုကယ်တင်သည်။ သင်လိုချင်လျှင် tabs, ပြိုလဲလျှင်သင်ရှိနေသည့်နေရာတွင်တည်းခိုနိုင်သည် (သင်ရွေးချယ်ပြီးသည်အထိ tabs များကိုမဖွင့်ရန်ပင်ညွှန်ကြားသည်) ။ ၎င်းတွင်ဖွင့်လှစ်သည့် tabs များအားလုံး၏ URL များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင် clipboard သို့ကူးယူရန်ခွင့်ပြုထားသောအလွန်အေးမြသည့် extension တစ်ခုရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် Epiphany / Web သည်ကျွန်ုပ်သတိပြုမိသောနှေးနှေးနှင့်မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပျက်စေခြင်းမရှိတော့ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည် Gnome ရှိလူများ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုများတွင်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေသည်။ မကြာခင်သူတို့ပြန်လာကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြပါစို့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Gnome2 နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ခုခုပြောခဲ့ရင်သူတို့ဟာကြီးစွာသောအရာတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲ
စကားမစပ်၊ "ငါဘာမှမလုပ်နိုင်အောင် X မပြောင်းလဲဘူး" လို့ပြောတဲ့သူတွေကိုနောက်တဖန်ပြန်စဉ်းစားမိစေချင်တယ်၊ တစ်ယူသန်ဝါဒဟာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုသဘောပေါက်လို့မရဘူး၊ အပြောင်းအလဲအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုရှာဖို့လုံလောက်ပြီ၊ ကပွင့်လင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းမပါဘဲကြိုးစားရန်ဖြစ်ပါသည်။
ငါ qupzilla ကိုကြိုက်ပေမယ့်အကန့်အသတ်မရှိ webs တွေ၊ evernote, readitlater စသည်ဖြင့်ဘာသာပြန်ရန် addons တွေမရှိခြင်း ငါကဒုတိယရှိသည်။ နှင့်ငါချစ်သောသူ :( ။
ငါအော်ပရာနှင့်အတူလာမယ့်နှင့် google chrome ကို 20
ငါ Firefox, Chrome, Opera နှင့် Ephifany ကိုသုံးခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့အော်ပရာပဲ။
QupZilla သည် Firefox extension / addon များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ addons.mozilla.org ဝက်ဘ်ကိုဝင်သောအခါ IE သို့မဟုတ် chrome ကဲ့သို့ပြုမူပါက၎င်းတို့ကို browser အတွက်ထူးဆန်းသည့်အရာအဖြစ်အနက်ဖွင့်သည်။ ၎င်းသည် PIM, Greasemonkey သို့မဟုတ် Mouse Gestures စသည့်သီးသန့်တိုးချဲ့မှုများကိုခွင့်ပြုသည်။ ထိုအ၌ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းရှိပါတယ်။
Chrome extension တွေအတွက်လည်းအလားတူပဲ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုကိုဆွဲချ။ ဆွဲချခြင်းအားဖြင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများသို့ဖြတ်လမ်းများဖန်တီးရန်သင့်အားခွင့်မပြုပါ။ တကယ်လို့များအဲဒါမဖြစ်ခဲ့ရင်ငါအများကြီးထပ်သုံးမယ်။ ဒါပေမယ့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သွက်လက်မြန်ဆန်ပြီးသင်ဝန်ခံရမယ်။
Intel ၏ချစ်ပ်အသစ်သည် Linux သို့မဟုတ် Android နှင့်မကိုက်ညီပါ